Ngaba intshukumo yeZionist ichasene nokuziphatha? URabhi uMichael Avraham
Ngaba intshukumo yeZiyoni ichasene nokuziphatha?
Iimpendulo > Udidi: Ngokubanzi > Ngaba intshukumo yeZiyoni ichasene nokuziphatha?
UAdir Ubuzwe kwiinyanga ezi-7 ezidlulileyo
Sawubona uRabhi, ndabona ukuba uzichaze ngokuthi "uZionist wenkolo", ngaphandle kwe-hyphen, ukugxininisa ukuba iZionism yakho ivela (kuphela, okanye ngokuyintloko) kwimilinganiselo yokuziphatha yehlabathi. Ke, bendifuna ukukubuza ukuba ucinga ntoni ngesi sicatshulwa silandelayo:
Ubuhlanga lucalucalulo okanye ubutshaba ngokwesiseko
I-Zionism yintshukumo yokusekwa kwelizwe lamaYuda kunxweme olusemzantsi-mpuma weMeditera, ummandla othe ngexesha lokuvela kweZionism kwakuhlala abantu abangengomaYuda - amaPalestina - amaKristu kunye namaSilamsi.
Kulungile, kodwa loo nto iyenza njani iZionism yobuhlanga?
ilula kakhulu. Khumbula inkcazo yobuhlanga? Masiyisebenzise:
Ucalucalulo kwisiseko sobuhlanga - iZionism ayikaze ibuze uluvo lwabantu basePalestine boMdabu malunga nokuseka ilizwe lamaJuda kwilizwe labo. Oku kukwaphulwa okunzulu kwemigaqo yedemokhrasi: nangona benza malunga ne-100% yabemi, akukho mntu wayezikhathaza ngokubuza ukuba abantu basePalestina bacinga ntoni. Ngoba? Kungenxa yokuba abangomaYuda. Umgaqo wedemokhrasi obalasele ngakumbi - intando yesininzi - iyalelwa kubemi bomthonyama belizwe, kodwa ukuba baphuma kwimvelaphi yobuhlanga engalunganga. Abemi bomthonyama basePalestina ngokuqinisekileyo baxhasa inkululeko yama-Arabhu, kodwa uluvo lwabo lwalunganiki mdla. Esi sizathu sokuba iZionist zichase ngokukrakra kuyo yonke iminyaka yesigunyaziso sokusekwa kwebhunga lezomthetho - kuba intando yesininzi yayiza kubhangisa ishishini lamaZiyoni.
Ubutshaba obusekelwe kubuhlanga - Ukususela ekufikeni kweZiyon, abantu basePalestina abahlala kwilizwe labo baye babonwa kwaye babonwa "njengomqobo." Ngoba? Ngenxa yokuba iZionism - ukusekwa kombuso "wamaYuda" - kufuna uninzi lwamaYuda kwilizwe. Kwaye ngenxa yokuba uninzi lwabantu basePalestine ababengengomaYuda ngelo xesha babebaninzi, ubukho baba bantu bomthonyama baba yinto engathandekiyo. IZiyonism yabangela into engakholelekiyo: abantu babonwa njengabangafunwayo - ngenxa yokuba behlala kwikhaya labo. Kwaye xa umpolitiki wanamhlanje wakwaSirayeli ebiza amaPalestina "iliva ecaleni" (ngokucacileyo umbhali wesicatshulwa wayethetha umphathiswa okhoyo wase-Israel, uNaftali Bennett, owathetha oku mhlawumbi ngokuchasene nemvelaphi yokudakumba ukuba ubukho basePalestina kwindawo imimandla “iphazamisana” noSirayeli eyithimbe).
Ngaba uRabhi unayo impendulo kula mabango? Oku kuvakala njengamabango anzima kakhulu. Ngenxa enokuba nithe ninguZiyon, njengoDavide uBhen-Guriyon, aniza kubaphendula nisithi, Siwiselwe umthetho ngako oko; Umbuzo, ke, ithini impendulo yakho kubo, "njengamanqaku ehlabathi."
Uluvo lwam kukuba le tekisi ilandelayo ayibuvuvu.
Okokuqala, iZionism yam ayisekelwanga kwimilinganiselo yokuziphatha, kanye njengokuba usapho lwam alusekelwanga ekuziphatheni. Ezi zizibakala nje. Ndingowasekhaya kwaye ndikwangowakowethu. Kwaye njengokuba usapho lwam ludinga ikhaya abantu bam bayalidinga ikhaya nabo.
Kulo mmandla welizwe kwakuhlala abantu bomthonyama abangenawo ubuzwe, ngaphandle kolongamo nangaphandle korhulumente. Akuzange kube yingxaki ukuza kuhlala apha kwaye sizame ukusekwa kwekhaya lesizwe ngelixa begcina amalungelo abo. Ingakumbi babathembisa ukwahlulahlula baza bala. Saya emfazweni sasidla. Ngoko musa ukukhala.
Amanqaku alifunayo akanalo Uphendulwe kwiinyanga ezili-7 ezidlulileyo
Kwakhona kubalulekile ukuba uqaphele ukuba inani labemi balo mmandla ngexesha lokuqala kweZiyonism lalincinci kakhulu, kwaye ininzi yabo yayingabaphambukeli abavela kumazwe angabamelwane. Ngokunyuka kwentshukumo yeZionist kunye nophuhliso lwezorhwebo kunye noqoqosho, abaninzi ngakumbi bakhetha ukufudukela apha. Malunga nenkulungwane kamva nabo bagqiba ekubeni babengabantu, kwaye okuseleyo yimbali.
Copenhagen Utoliko Uphendulwe kwiinyanga ezili-7 ezidlulileyo
Ucalucalulo hayi ngezizathu zobuhlanga kodwa ngobunini. Xa unelungelo lokugqiba ukuba ngabaphi abantu abangabaziyo abaya kungena kwikhaya lakho, "awucaluli ngenxa yobuhlanga." Akukho mahluko usisiseko phakathi kokuthintela ukungena kwangaphambili kunye nokukhupha abantu ongabaziyo emva kokuba bahlasele ikhaya lakho ngelixa ungekho.
Abantu bakwa-Israyeli ngokusisiseko baqulunqwe yinzala yaseBhabheli naseRoma (kubandakanywa nabo sibamkele ixesha elide kusapho) kwaye ukusukela ngoko iindlalifa zithathwa njengabanikazi bomhlaba kuphela abasemthethweni.
Emanuel Uphendulwe kwiinyanga ezili-7 ezidlulileyo
Kodwa ngaphandle koku, uRabbi Michi ucinga ukuba kunokubakho ikamva emandleni kwaye nasekuthandeni ukhetho "lokulungisa": nanku uBen Barak olahlekileyo:https://www.srugim.co.il/620627-%d7%a8%d7%9d-%d7%91%d7%9f- %d7%91%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa
Mhlawumbi lixesha lokubala kwakhona ukuziphatha?
Zonke iintlobo ze.
I-RAAM kunye ne "Takia"
Okanye okanye Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Nendlu yesithathu Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Ukubuyiselwa ‘kwelungelo’ kuya kuvumela izindlu ezibini zezopolitiko kumaqela amabini oluntu lonqulo lwesizwe Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Elhanan Vula Impendulo yazo zonke iintlobo.
7 Coca xa kungekho mfuneko Vula Impendulo kubunyulu bentsapho